Booqo Haninge - Dhacdooyinka iyo waxyaabaha laga sameeyo Haninge
Gal / Diiwaangeli
Ku saabsan booqashada haninge
Shirarka sanadlaha ah
Ma lihid dhacdooyin ku jira liiska.
Baro haninge Facebook
Goobaha la booqdo
Sawirka saafiga ah ee Frönäs, Gålö 28 Maajo 11 subaxnimo
Eeg, samee oo khibrad
Naturpasset iyo Cykelpasset - Dabciga ka baxsan oo isku day jihaynta
Baro doonista Dalarö
Dukaan iyo dukaan
Sanduuqyada hilibka oo leh hilib daaqsin dabiici ah oo ka yimid beerta Tyresta
Hoyga iyo hoyga
Hotelka Tayada Winn - Habeenkii ku hoy meel u dhow aagga bannaanka ee Rudan ee quruxda badan
Tilmaan ka diyaarso Tyresta - Geeridu waxay ku nooshahay kaynta ugu horreysa
Eeg & Samee
Haninge waxaa ku yaal dhowr goobo ganacsi. Xarunta dukaamaysiga ugu weyn, xarunta Haninge, waxay leedahay dukaamo aad u tiro badan. Mid kale waa Port 73 albaabka laga galo Haninge oo leh i.a. Coop Forum iyo bakhaarro leh sumado caan ah. Dhagax -tuur waxaa jira dukaamo badan sida ICA MAXI iwm. Xarumaha dukaamaysiga yar waxay ku yaalliin Västerhaninge iyo Brandbergen.
Dhamaadka fog ee xeyndaabka bannaanka ugu sarreeya waa Jasiiradda Huvudskär waana mid ka mid ah kaydka dabeecadda ee Haninge. Waxaa jira 200 jasiiradood, cobs iyo skerries. On Ålandsskär, tuulo kalluumeysi oo laga soo bilaabo qarniyadii dhexe, waxaa ku yaal dhismayaal. Tullhuset maanta waa hostel, guriga tijaabada ah waxaa ku yaal bandhig ku saabsan taariikhda Huvudskär. Laga soo bilaabo laydhka waxaad leedahay aragti cajiib ah. Aasaaska Archipelago ayaa maamula jasiiradda iyo hostel -ka. Waxholmsbolaget waxay Huvudskär ku shaqaysaa Fjärdlång oo ka timaada Dalarö 3 maalmood usbuucii T / R xagaaga.
Goobta teendhada Utö
Utö waxaa ku yaal mid ka mid ah xerooyinka ugu wanaagsan jasiiradaha. Midigta badda, oo leh muuqaal qurxoon oo ah dekedda koonfureed iyo Mysingen - iyo xeeb bacaad aad u gaar ah leh oo si toos ah ugu xigta xerada! Xerada ayaa leh aqal adeeg leh oo leh musqulo, qubeys iyo meel yar oo leh kuleyllo kulul. Xeradu waa qaab -dhismeedka dibedda mana laha meelo tirooyin leh, sidaas darteed shaqsiyaadku uma baahna inay boos qabsadaan. Fasallada dugsiga iyo kooxaha waaweyn, dhinaca kale, waxay u baahan yihiin inay hore u sii ballansadaan. Si aad u ballansato iyo macluumaad la xiriir Hamnboden taleefan: 08-501 57 450
Qasriga Häringe waxaad ku noolaan kartaa sida boqor. Ama maxaad ugu noqon weyday xiddig filim Greta Garbo qol keli ah, asal ahaan laga soo bilaabo 1930 -kii. Qolalka huteelku waxay ku yaalaan agagaarka qalcadda iyo qaybo badan oo kala duwan; wax walba oo ka socda qolal keli ah ilaa qolal raaxo leh iyo suuliyo. Waxa kale oo aad si gooni ah ugu noolaan kartaa gurigaaga oo leh beertiisa, musqusha weyn iyo jikada si buuxda u qalabaysan. Häringe waxay si qurux badan oo aan caadi ahayn u jirtaa 25 daqiiqo koonfur Stockholm. Halkaan, magaalada weyn waxay dareentaa meel fog markaad ku dul socoto dhul baaxad leh, oo ku xigta jasiiradaha iyo keyd dabiici ah oo weyn. Halkan way fududahay in lagu raaxaysto oo lagu nasto.
Caano yar oo maxalli ah oo ku yaal kaniisadda Österhaninge, oo koonfur ka xigta Stockholm. Waxaan soo saarnaa farmaajo farsameysan oo noocyo kala duwan leh, oo ka bilaabma jiiska kareemka wanaagsan ilaa jiiska jilicsan ee adag. Magacyada farmaajada waxaa laga soo qaadaa meelaha Haninge - Tyresta, Vendelsö, Åva iyo kuwa kale. Caanaha aan samayno waxay ka yimaadaan lo'da beerta Stegsholm ee Gålö. Waxaan leenahay dukaan beer oo furan sanadka oo dhan. Eeg mareegaha wakhtiyada hadda jira.
Nordic Trails waxay ku qabanqaabisaa safarrada baaskiilka iyo socdaalka ee jasiiradaha Stockholm ee ku siinaya dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad awood ugu yeelatid inaad isticmaasho fasax firfircoon kaligaa dabeecadda quruxda badan, deggenaanta iyo gaarka ah ee jasiiradaha.
Waxay ku taallaa Beerta Qaranka ee Tyresta. Roodhida gurigayaga, waxaan ku dubnaa maaddooyinka dabiiciga ah intii suurtogal ah. Shaaha iyo kafeegayagu sidoo kale waa ganacsi dabiici ah / caddaalad ah. Waxaan hubinnaa in qof walba uu wax la cuni karo oo nala cabi karo, sidaa darteed waxaan kuu soo bandhigi karnaa wax aan ahayn khudaarta, vegan, lactose ama dulqaad la'aanta gluten. Ku soo dhowow annaga ayaa u rajeynaysa Lena shaqaalaha. Waxaan furannahay sannadka oo dhan waxaanna leenahay dabeecadda geeska!
Xafiiskii hore ee macdanta waxaa ku yaal baarka Utö Värdshus iyo qolal wax lagu cuno oo leh jawi bad iyo hoy leh. Halkaan waxaad ku cuni kartaa la carte qadada iyo cashada labadaba waxaadna ka cabbi kartaa wax kasta qaxwada ilaa shaambada. Xilliga xagaaga, veranda qorraxda ee qorraxdu waxay furan tahay subaxa ilaa fiidka iyo jiilaalka marka dhaxanku dhammaato, waxaad naftaada ku kululayn kartaa shukulaato kulul ama khamri la shubay oo hor yaal dabka qiiqaya ee dushiisa.
Jasiiradaha koonfureed ee Haninge, Hårsfjärden dhanka galbeed iyo gacanka weyn ee Mysingen ee bannaanka ka soo horjeeda, ayaa ku taal Muskö. Halkan, ciidanka badda ee Iswiidhan wuxuu lahaa saldhiggiisii ​​ugu weynaa laga soo bilaabo qarnigii 1500aad ilaa 1967. Saldhig weyn oo badda ah oo ku yaal aag weyn sida Magaalada Old ee Stockholm ayaa lagu qarxiyay dhagaxa. Sanadihii 1960 -meeyadii, tunnel ayaa laga dhisay Muskö iyo dhul -weynaha. Tunnel -ka baabuurka ayaa dhererkiisu ku dhow yahay 3 kiilomitir wuxuuna socdaa ilaa 66 mitir oo ka hooseeya gacanka. Muskö waxaa ku yaal laba guri oo waaweyn laga soo bilaabo qarnigii 1700aad, Arbottna iyo Ludvigsberg.
Degaan qurux badan oo jasiirado leh, Almåsa waxay ku siisaa hoy hal qol ama laba qol ah - dhammaantood waxay leeyihiin balakoon ama barxad, badankoodna leh aragtiyo badda. Casho waxaa lagu qaadan karaa guriga weyn ama horay loo sii ballansan karaa casho u gaar ah Svartkrogen (Sabtiyada la soo xulay waa in horay loo sii ballansadaa), Almåsa waxay bixisaa waxqabadyo ballaaran sannadka oo dhan, kooxaha iyo shirarka. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga ogaan karo Almåsa iyo nawaaxigeeda. Waxaan kugula talineynaa socodka dabeecadda, dhiirrigelinta quusitaanka badda ee xeebta bacaadka ah iyo tiirarka.
Dalarö taariikhi ah
Dalarö waxaa la aasaasay 1636 sanadihii la soo dhaafay waxay ahayd kastam iyo saldhig tijaabo, ganacsi iyo dekedda badda. Qarnigii 1800aad, Dalarö wuxuu noqday goob bulsho oo maanta waa goob fasax oo aan caadi ahayn, laakiin sidoo kale waa qodob muhiim u ah nuqulka iyo albaabka jasiiradaha koonfureed. Strindberg wuxuu ugu yeeray Dalarö iridda janada. Jasiiradaha Dalarö waa markabkii ugu badbaada badnaa aduunka ee la ilaaliyay qarnigii 1600aad. Ma rabtaa inaad iyaga la kulanto oo aad wax badan ogaato? Waxaan u habeynnaa booqashooyinka la hagayo iyo socdaallada doonyaha ee kooxaha yaryar ama kuwa waaweyn sannadka oo dhan. Wac 08 - 501 508 00 ama iimayl info@dalaro.se
Makhaayadda Tullhuset & Bar
Waxaan u adeegnaa cunno iyo cabitaanno diiradda dabiiciga ah waxaana doorannaa maaddooyinka iyadoo loo eegayo helitaanka iyo sida ugu fiican xilli kasta waa inuu bixiyaa. Bilaha xagaaga waxaan furannahay 12.00 - 22.00 maalin kasta. Xilliga jiilaalka, waxaan u adeegnaa Dagens Qadada Isniin -Jimce 10.30 - 14.00. Waxaan sidoo kale furan nahay Jimcaha iyo Sabtida 16.00-22.00. Ballan noogu samee aroos, baabtiis ama aaska Sidoo kale cuntada. Tel. 08-501 501 22 Soo dhawayn diiran!
Ekudden waa meesha adiga loogu talagalay oo abaabula xeryaha, koorsooyinka, shirarka ama xafladaha gaarka loo leeyahay. Ku kari cuntadaada jikadaheena waaweyn, ee qurxoon, ka dalbo wax -ka -qabashada beertayada dariska ah mise waxaad doorbidi lahayd in cunto kariyahaagu kuu yimaado oo cuntadaada ku kariyo goobta? Annaga, way fududahay inaad ballansato oo aad samayso isu -imaatinno marka la eego aagagga dubitaanka, sauna, xeebta ciidda, barxadda iyo garoonka kubbadda cagta, way fududahay in la noolaado oo lagu raaxeysto. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta ay martideena u soo laabtaan sanadba sanadka ka dambeeya! Waxaan bixinnaa ikhtiyaarro sida nadiifinta iyo sidoo kale xaashida iyo shukumaannada ballantaada. Sidoo kale ka faa'iidayso fursadda si aad u ballansato tubbada kulul ee caanka ah! Waan caawinaa
Jeebka dambe Utö
Iyada oo leh jawi aad uga sarreeya mastarada dekedda, Bakfickan waxay kuu tahay kaar badbaado leh oo aad u gaajaysan tahay muusigga, xafladda iyo shirkadda wanaagsan. Bakfickan wuxuu furan yahay Sabtida laga bilaabo Valborgsmässoafton ilaa dhammaadka toddobaadka ugu horreeya ee Oktoobar iyo Wed-Sat inta lagu jiro xagaaga sare, saacadaha furitaanka 22-03.
Ku raaxayso cunto wanaagsan iyo dabeecadaha jasiiradaha cajiibka ah, kirayso baaskiil ama u soco badda. Qolalkayaga huteelku waxay ku yaalliin dhismayaal kala duwan, oo asal ahaan ka soo bilaabmay waayihii hore sidii xeeb xeebeed, laakiin hadda qolal huteel oo casri ah oo la dayactiray oo leh qubeys, WC, taleefan iyo TV. Qolalku waa diirran yihiin oo raaxo leh oo qurxinta ayaa si taxaddar leh loo doortay si loo dhammaystiro dabeecadda jasiiradaha cajiibka ah. Ku diyaarso baakadahayada la awoodi karo cuntooyin iyo waxqabadyo ku habboon guga, xagaaga iyo dayrta ama dabcan miiska kirismaska ​​iyo suuqa kirismaska ​​ee Utö bisha December. Buurta korkeeda Värdshuset waxaa ku yaal hoteelka Skärgården kaas oo haya
Beer qoys oo nool, 1km u jirta Gålö. Dhagaxa wax lagu gooyo ee dhabta ah, waxaa ku yaal kafateeriyada beeraha iyo dukaanka beeraha, halkaas oo aan ka iibinno hilibka xoolahayaga, hilibka lo'da iyo wanka. Waxa kale oo aanu ka iibinnaa jaariyada ka samaysan caanaheena iyo kalluunka, malabka iwm. Sannadka oo dhan waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad daawato / kaxaysato / salaaxdo dhammaan xayawaankeena laga soo bilaabo bakaylaha yaryar ilaa weylaha dhexdhexaadka ah iyo lo'da / fardaha waaweyn. Reer Borg waa ku soo dhaweynayaan
Hotel Tayo Winn Haninge
Hoteelka cusub ee Tayada Winn Haninge ayaa si buuxda loo dayactiray lana furay dhawaan Febraayo 2017. Waxaan jeclaan lahayn inaan kugu soo dhaweyno hoteelka ugu fudud ee Sweden laga heli karo iyo qolka fadhiga ee Haninge! Waxaad naga heli doontaa badhtamaha badhtamaha Haninge, kaliya 20 daqiiqo oo tareenka raacaya Stockholm C, 10 daqiiqo oo ka socota Bandhigga Stockholm iyo 1 daqiiqo oo socod ah oo loo socdo saldhigga tareenka ee raaca ee Handen. Huteelku wuxuu leeyahay 119 qol oo huteel oo si fiican loo qurxiyey oo waliba qolal u fidiya qoyska weyn. Annaga, waxaad joogi kartaa ilaa lix qof qolalka qaarkood, oo ku habboon xitaa kooxaha isboortiga. Ku soo dhowow mar kasta oo adiga kugu habboon!
Bartamaha Södertörn ee quruxda badan waxaa ku yaal Fors Gård oo laga soo bilaabo Wakhtigii Viking. Waxaan sannadka oo dhan u furan nahay dugsiga fuulitaanka, fuulitaanka bannaanka iyo casharrada gaarka ah ee fardahayaga Icelandic, iyo raacayaasha khibradda leh casharrada raaxada ee fardahayaga Lusitano. Waxaan ku habeyneynaa shirarka, furitaannada iyo xafladaha aroosyada oo leh xiriir faras sida rabitaanku yahay. Beerta waxaa ku jira dhowr dhisme oo taariikhi ah. Warshadii hore ee ka soo horjeedda rapids -ka ayaa iyaduna lahayd miinshaar iyo gooftii hore waxay ku noolyihiin dadka ka shaqeeya beerta. Ku soo dhowow inaad wacdo 08-500 107 89 ama email noogu soo dir bokningen.forsgard@telia.com
Beer qoys oo nool, 1km u jirta Gålö. Waxaan haynaa ilaa 40 sac oo caano ah iyo ilaa 80 xayawaan oo da 'yar ah oo ilaaliya daaqa geedkii cajiibka ahaa. Jasiiradaha ku yaal jasiiradaha cajiibka ah ee Stockholm. Xilliga xagaaga waxaan leenahay kafateer beer, roodhida beeraha iyo maqaayadda beeraha. Ku fadhiiso barxaddeena oo ku raaxayso aragtida beeraha iyo geedaha geedaha ah. Waxaan rabnaa inaad dareento jawiga qoyska oo aan rajaynayno inay dhadhan fiican ku yeelato cuntadayada guriga lagu sameeyo iyo roodhida qaxwada ee wanaagsan.
Nåttarö waxay leedahay xeebaha ciidda ugu weyn uguna fiican ee jasiiradaha. Ciid weyn ayaa ah xeebta ugu caansan laakiin sida fiican ayaa ah Skarsand aan la aqoon. Jasiiradda oo dhan waa keyd dabiici ah waxaadna ka kalluumeysan kartaa, kaxayn kartaa ama ku lugayn kartaa kaymaha sixirka oo aad ku arki kartaa indhaha sida Godka Boqoradda. Waxa kale oo jira raad dabayl leh oo leh calaamado biyaha hoostooda ku saabsan nolosha biyaha hoostooda. Woqooyi ugu fog waa buurta ugu dheer jasiiradda, Bötsudden, oo leh aragtiyo cajiib ah. Nåttarö waxaa ku yaal huteel, maqaayad, aqallo, goob teendho iyo dukaan waddan. Waxaad halkan ka helaysaa Waxholmsbåt oo ka socota Nynäshamn.
Almåsa, Brandbergen Bio Cosmopolite, Dalarö, Fjärdlång natural reserve, Gålö nature reserve, Haninge C, Huvudskärsarkipelagen, Häringe castle, Jordbro, Kymendö, Muskö, Nåttarö, Ornö, Rånö, Sandemarå National Reserve, Smådala park, park, Ålö, Castle Årsta, Öster- iyo Västerhaninge
Copyright © 2022 Mawduucyada UX
Användarnamn eller e adareeyska *
Kom mig ihåg
Furaha sirta ah ayaa loo diri doonaa cinwaanka emailkaaga.
Macluumaadkaaga shakhsiyeed ayaa loo isticmaali doonaa si loo wanaajiyo khibradaada mareegaha, loo maareeyo gelitaanka koontadaada iyo ujeedooyin kale oo lagu sharraxay annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.